Uphengululo lwe-OUKITEL U18, ngaphezulu kweklone ye-iPhone X | I-Androidsis
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izaziso, I-Oukitel, Reviews
Sasijonge phambili ukuvavanya le fowuni kwaye ekugqibeleni siyifumene. Kwi-Androidsis sikwazile ukuvavanya i-OUKITEL U18 entsha kwiintsuku ezimbalwa. I-Smartphone ebanga ukuba injalo Isikrini esipheleleyo esiphefumlelweyo se-iPhone X sokufika kwintengiso. Kwaye inyani kukuba isikrini sakho sijongeka sihle kakhulu.
Isikrini esona simangalo salo ukhuphiswano. Ifomathi yayo yenza ukuba ithathelwe ingqalelo njenge "clone" ye-iPhone X edumileyo. Kodwa inyani kukuba i-OUKITEL U18 ayisiyiyo kwaphela. Ukongeza kwiscreen esihle esiphefumlelwe ngokucacileyo nguluhlu. Le fowuni isinika okuninzi. Kwaye konke oku ngexabiso le- kuphela i-154 $ onokuyithenga ngokunqakraza apha.
1 I-OUKITEL U18 ayisiyiyo nje "into" ye-iPhone X
3 Uyilo lwe-OUKITEL U18 esinye sezixhobo zayo ezikhulu
4 Isikrini se-OUKITEL U18 sinomtsalane omkhulu
5 Iprosesa eyaziwayo enika iziphumo ezilungileyo
5.1 I-Android 7.0 enepesenti ephezulu "yokusulungeka"
6 Iphepha ledatha i-OUKITEL U18
7 Ifoto ye-OUKITEL U18 ivela kwisandla sikaSony
7.1 Isicelo sekhamera esipheleleyo
8 Ngaba ibhetri ye-OUKITEL U18 yanele?
9 Ukhuseleko luzuza ukuzithemba
9.1 Inkqubo ephuculweyo yokwamkelwa kobuso
10 Ndivalelise okokugqibela kwi-3.5 mm jack?
11 Eyona ilungileyo kunye neyona ilungileyo ye-OUKITEL U18
11.1 Eyona nto ibhetele
11.2 Ngaphantsi elungileyo
I-OUKITEL U18 ayisiyiyo nje "into" ye-iPhone X
Kucacile ukuba yintoni enye Yima geqe okokuqala kule fowuni yile Inkangeleko yakhe yomzimba. Indlela yokusebenzisa iphaneli yangaphambili ngomboniso. Kwaye umngxunya ongaphezulu wesithethi kunye nabenzi boluvo uyabonakala kakhulu. Yiyo loo nto i-OUKITEL isekela elona phulo layo lentengiso. Ukuba ithathelwe ingqalelo njengentsimbi ye-Smartphone enkulu yinto eyaneleyo yokufumana ingqalelo. Kwaye uye waphumelela.
Ukujonga njengeSmartphone esinamandla kuhlala kunjalo isixhobo esintlangothi-mbini. Yinto esele siphawule ngayo kolunye uphononongo malunga nee-smartphones "eziphefumlelweyo" zezinye eziphezulu. Ukuba sithelekisa le OUKITEL U18 kunye ne-iPhone X ayizukuphuma kakuhle. Kodwa nokuba oku kuyenzeka, ukusebenzisa i-iPhone ukuzazisa sisicwangciso esisebenzayo.
Kodwa ayisiyi-Smartphone kuphela ejongeka njenge-iPhone X. I-OUKITEL U18 ine ikhamera ezimbini zenziwe ngu-Sony 16 Mpx + 5 Mpx. Inye I-4.000 mAh ibhetri ethembisa ukuzimela ngaphezulu ngokwaneleyo. Kwaye inenkumbulo I-4GB ye-RAM kunye nokukwazi Ukugcinwa kwangaphakathi kwe-64 Gb.
Ixhotywe ngokukhawuleza umfundi weminwe. Ikwanayo Inkqubo yokwamkelwa kobuso yokuvula. Isinxibelelanisi sokutshaja kunye nokudluliswa kwedatha Uhlobo C lwe-USB. Kwaye ngokujika okungasemva kunye nokugqitywa kwescreen ngenkangeleko ekhangeleka kakhulu. Njengoko sibona, ngaphezulu kwezizathu ezaneleyo zokungahlali nenyaniso yokuba iyafana ne-iPhone X.
Njengokwesiko ngazo zonke ii-smartphones esizifumanayo, siyathanda ukwenza uluhlu oluncinci. Kwaye ndikuxelele into esiyifumanayo ngaphakathi kwebhokisi yale OUKITEL U18. Uyilo lwecala lefowuni ngokwalo, njengoko ezinye iifemu bezisenza, asiyoyesiko. Endaweni yebhokisi yoxande yeklasikhi esinayo Ityala elikhulu ngakumbi nelisikwere, kunye nokubhitya.
Kodwa masingene ngaphakathi, yeyona nto inomdla kuthi. Njengoko kusengqiqweni, ngaphambili sifumana isixhobo ngokwaso ihlanganiswe ngokugqibeleleyo kwaye ikhuselwe ngeplastikhi yokuncamathela. Kwaye phantsi kweendaba ezifanayo. Ukungabikho esele kubonakala ngathi kuthathwa ngabavelisi kunye nabasebenzisi. Akukho zintloko kwaye asikayithandi loo nto.
Sineziseko. Inkqubo ye- Intambo ye-USB, kule meko iphela Uhlobo C, yokutshaja kunye nokudluliswa kwedatha. Isinxibelelanisi sothungelwano lombane, kulo mzekelo yiYurophu, into engathathelwa ngqalelo ngabavelisi bonke. I "pin" ukuvula ikhadi slot. Incwadana encinci ene imiyalelo esisiseko kunye nokuhambelana Ulwazi lwewaranti.
Kwakhona, sinayo iadaptha yokusebenzisa ii-headphone zethu eziqhagamshelwe kwisinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB. Kwakhona, enye ifemi ethatha isigqibo sokwenza i-smartphone ngokulahla isinxibelelanisi sejack mini yee-headphone. Singazisebenzisa ii-headphone zethu, kodwa ngaphandle kwale ntambo incinci yeadaptha. Ukunambitha imibala, kodwa kwi-Androidsis sisasithanda isinxibelelanisi sikaJack.
Ukuthi i-OUKITEL yenye yeefemu ezihlawulela ukungabikho kwee-headphone ngesipho esincinci. Into esisiseko kodwa ixatyisiwe. Umkhono we-silicone ingena ngokugqibeleleyo kwifowuni yethu entsha. Kwaye oko kuyakukhusela kumaqhuma nakwimikrwelo enokwenzeka. Iinkcukacha esizithandayo, kwaye ngethamsanqa ziya zixhaphaka.
Uyilo lwe-OUKITEL U18 esinye sezixhobo zayo ezikhulu
Inyaniso kukuba ukubonakala kwakhe, Ukongeza ukusikhumbuza nge-iPhone X, ikwavelele ezinye izinto. I-OUKITEL U18, ukongeza ekubeni nescreen esihle kakhulu ikhamera yeefoto ezimbini yenziwe nguSony esiza kuthetha ngayo ngokweenkcukacha. Emuva kwayo sijonga ikhamera embindini wesixhobo, kwinxalenye yayo ephezulu. Ecaleni kwakhe kabini Isibane se-LED. Y ngezantsi komfundi weminwe yakho iminwe yeminwe.
Ngokuphathelele izinto zokwakha Kufuneka sitsho ukuba inqanaba lihla kakhulu ngasemva. Kule meko sifumana iplastiki. Izinto ezazibonakala ngathi sele zilibalekile. Nangona inyani yile ukugqitywa kwayo kunomdla kwiso kwaye imnandi ekuphathweni. Ukongeza, kwindawo yekhamera kukho uhlobo lwee-indent ezincinci ezinikezela ngenkangeleko entsha kwaye eyahlula abanye, ngakumbi umgca.
"Ukubambelela" kwezinto zilunge kakhulu. Kwaye ifowuni isesandleni asinalo uvakalelo lokuba ityibilika. Enye into elungileyo malunga nale nto yile iinyawo zethu aziyi kungcolisa ifowuni ngokuchukumisa nje. Iplastikhi yayiphuma ngesitayile, kodwa ngaba zazibi njalo? Mhlawumbi amabanjwa eefashoni, abanye abavelisi bakhethe iglasi okanye isinyithi. I-OUKITEL iyaqhubeka nokusebenza ngeplastikhi, kwaye isiphumo asibi kwaphela. Siyathanda.
Yiselfowuni ebambe kakuhle ngesandla esinye njengoko icuthile kancinci. Nangona ekuqaleni inika umbono wokuba unzima ngandlela ithile kunesiqhelo. Ngenxa yebhetri yayo ye-4000 mAh. Uyilo lwayo ngokubanzi inenqaku elilungileyo. Inxalenye engaphambili ibetha kakhulu kwaye umva uyintsusa kwaye ugqibe kakuhle.
Kwi Icala Elilungile siyifumene iqhosha lokutshixa, kunye neqhosha elide le- ulawulo lwevolumu. Amaqhosha anokuhamba okuhle, kulula ukuwacofa nkqu nomkhono we-silicone on. Sele sivavanye ezinye ii-smartphones ezithi ngesimbozo sizenze nzima kakhulu ii-cores zazo, oku akunjalo.
El Icala lasekhohlo linamaqhosha. Sifumene kuphela ifayile ye- slot esuswayo yamakhadi SIM kunye nememori. Kwinxalenye yayo esezantsi sifumana umngxunya wemakrofoni kwaye ecaleni kwayo sisithethi, esingaphindi sibe sisitiriyo. Kwaye embindini, i-OUKITEL U18 inayo esele yamkelwe sisininzi, Uhlobo lwe-USB C. Inxalenye ephezulu icace gca. Sukufuna umngxuma wokungena jack encinci. U-OUKITEL ugqiba kwelokuba angabinaye, into esingayithandiyo ngalo mzuzu.
Njengomdla wokwazi malunga nayo yonke i-Smartphone esine-screen, sifuna ukunika izimvo kwinto abanye abathengi abanokubuza kuthi. Inxalenye ephezulu yesikrini, apho sifumana khona "inotshi" okanye u "U" ayisika imifanekiso, izaziso okanye umxholo wemultimedia. Isoftware ilungiselelwe ngokugqibeleleyo ukuze izaziso, iifoto okanye iividiyo zibonakale zilunge kancinci. Ngale ndlela akukho nto isikiweyo kwaye yonke into ijongeka ngokugqibeleleyo.
Isikrini se-OUKITEL U18 sinomtsalane omkhulu
Kucacile ukuba iscreen sale Smartphone yeyona "hook" yayo iphambili. Inesitayile esifana ne-iPhone X kunye nemilo.Ngokunjalo nokuqhayisa ngesikrini esipheleleyo esiphefumlelwe sisikhumbuzo seminyaka eli-XNUMX ye-iPhone ukuba sibekhona kwimarike. Kwaye ukubonakala kwayo kubonakala kulungile kwisixhobo esihambelanayo, esigqitywe kakuhle.
Sijongene nepaneli ephambili esetyenziswe kakuhle kunye nescreen nge I-2.5D iglasi ejikeleze i-IPS LCD enobungakanani be-intshi eyi-5,85. Ibe isisombululo 720 x 1440 px, Ngobuninzi bentsingiselo ye Iiphikseli ezingama-275 nge-intshi nganye. Kunye 21: 9 "uboniso olupheleleyo" ukonwabela umxholo wakho wemultimedia kwiscreen esigcweleyo.
El ipaneli yangaphambili ityhilwe kwi-max eziphelweni zalo zozine. Kuphela kwinxalenye yayo esezantsi kukho umgca omncinci ongekho kwindawo yescreen. Ngokuchasene nokubonakala ngathi, ayenzelwanga amaqhosha asebenzayo e-Android. Ezi zibekwe ngaphakathi kwesikrini uqobo, kodwa zifihliwe xa sifuna ukubona into kwiscreen esigcwele.
I-OUKITEL U18 kuyo ecaleningokunjalo kwi phezulu nasezantsi unayo phantse izakhelo zesikrini ezingekhoyo. Umboniso uyilo okanye "Inotshi" gqiba ngaphezulu. Amava omsebenzisi ahle kakhulu. Kulula emehlweni, kwaye ibonisa umgangatho ophakamileyo wombala kunye nenkcazo. Ngokubanzi, isikrini siyimpumelelo enkulu, into eyenza ukuba ibe yi-Smartphone "eyonwabisayo".
Ngokubeka "kodwa", ukwenza ikhuselo lesaziso okanye iindlela ezimfutshane kuya kufuneka utshintshe imikhwa ethile. Ukuba ubunomkhwa woku Swayipa uye phezuluembindini wesixhobo ukujonga izaziso okanye iindlela ezimfutshane. Kunye ne-OUKITEL U18 kuya kufuneka uyenze ekoneni ukusukela embindini, xa "ukuqala" iscreen esiya ezantsi asisiqapheli esi senzo.
Iprosesa eyaziwayo enika iziphumo ezilungileyo
Ngokwabavelisi bayo, i-OUKITEL U18 yenzelwe ukusebenza kakuhle. Inyani yile ukusebenza kwayo kuye kwacaca. Akukho kuphuma, akukho "ukuxhoma" kwaye akukho ngozi okanye ukuqala kwakhona okungalindelekanga. Sikwazile ukuvavanya i-OUKITEL U18 ngezona zicelo ziqhelekileyo kwaye yonke into isebenze ngokugqibeleleyo.
U-OUKITEL uthathe isigqibo sokuba neprosesa eqinisekiswe kakuhle. Uyaqaphela Umsebenzi omkhulu wokufumana iprosesa kunye nezixhobo zokudibanisa ngaphandle komthungo. Emva kokuzama ngayo, kufuneka sitsho ukuba iziphumo bezilungile. Sinokuqinisekisa ukuba i-OUKITEL U18 inakho konke esinokukucela kwi-Smartphone.
Sinefayile ye- IMediaTek MT6750Titshiphu I-octa-core 1,5 GHz ephendula kakuhle kwesi sixhobo. Enkosi ngokuqinisekileyo kwisisa Imemori ye-RAMnjengoko i-OUKITEL U18 ixhotyisiwe 4 GB. Kwaye inenkumbulo yangaphakathi ye Ukugcinwa kwe64GB. Amanani abalulekileyo anika kuphela le Smartphone ngamandla kunye namandla afanelekileyo kwezona fowuni zikhethekileyo.
Ngokubhekisele kwi-GPU, i-OUKITEL U18 iza ixhotyiswe nekhadi yemizobo eyaziwayo. Inkqubo ye- I-ARM Mali T8620 MP2, njengoko sikwazi ukuqinisekisa, iziqinisekiso ukusebenza kakuhle. Kwaye inika iziqinisekiso ezifanelekileyo nezaneleyo kunye neziphumo zokufumana okuninzi kwesikrini sakho esikhulu.
I-Android 7.0 enepesenti ephezulu "yokusulungeka"
Ukuba sijonga isoftware, kwi-OUKITEL bakhetha ngokucacileyo I-Android kuhlobo oluphantse lwenzeka. Kule meko sisenayo ingxelo 7 INougat. Nokuba ayiyonguqulelo emsulwa ngokupheleleyo ye-Android. Kuya kufuneka sitsho ukuba ulwenziwo ngokwezifiso kakhulu phezulu. Inkangeleko ebonakalayo yeempawu zangaphakathi zesicelo azitshintshi.
Ngamafutshane, Kwinkalo yokusebenza kufuneka sithethe ngokwaneleyo kwi-OUKITEL U18. Omnye umgqatswa oqinileyo onobungqina obaneleyo bokulwa ubuso ngobuso ngokuchasene nayo nayiphi na i-Smartphone kuluhlu oluphakathi kakhulu lwe-Android.
Iphepha ledatha i-OUKITEL U18
Inkqubo yokusebenza Android 7 Nougat
Isikrini 5.85 intshi
Inkqubo IMediaTek MT6750T
GPU I-ARM Mali T8620 MP2
Cámara trasera Ezimbini ezimbini + 16 Mpx
Ikhamera yangaphambili I-13 MPx
Ubukhulu 150.5 mm x 732 mm x 10 mm
U bunzima 213 gr
Thenga apha i-OUKITEL U18 ngokwazisa.
Ifoto ye-OUKITEL U18 ivela kwisandla sikaSony
I-OUKITEL, njengabavelisi abaninzi kwilizwekazi laseAsia, bakhetha umenzi wangaphandle weekhamera zabo. Into ekhokelela kuphuculo kwicandelo lokufota. Ngakumbi ngakumbi xa isigqibo senziwe ukukhetha abenzi abaziwayo kule ndawo.
I-OUKITEL U18 ineSony IMX135 Exmor RS sensor. Isivamisi esivelela ukuba asisiyonto intsha. Kukho izixhobo ezininzi okoko i-2.014 ithathe isigqibo sokuba nayo, njenge-Samsung Galaxy Qaphela 3. Ngesi sizathu, kubonakala ngathi kuphelelwe lixesha kwi-Smartphone ebona ukukhanya kwemini ngo-2.018. Kwaye yinto eqaphelekayo kumaxesha athile.
Iikhamera zeefoto ziye zavela kakhulu kule minyaka idlulileyo, kwaye Inzwa ekhethwe yi-OUKITEL kwi-U18 yayo ibonakala ngathi ingcono, ubuncinci ngokwemigaqo yobutsha. Sicinga ukuba ukukhetha inzwa engeyiyo entsha kuya kubiza. Iziphumo zeefoto ezithathiweyo zityhila.
Nangona ukubambisa ngokwamkelekileyo, isantya se-shutter kunye nokugxila kwiimeko zokukhanya eziphantsi kushiya okunqwenelekayo. Kule foto, ngokukhanya okuphantsi kakhulu kunye nokusebenzisa ifleshi, sibona indlela inkcazo yento esembindini efanelekileyo ngayo. Nokuba kufikelela kwinqanaba elamkelekileyo leenkcukacha.
Ikhamera engasemva ngokwasemzimbeni imi embindini wesixhobo, kwaye ibeka iilensi zayo ngokuthe nkqo ngaphezulu kwenye. Ifleshi ibekwe ngasekunene. Kwaye zombini ezi zinto zivelile ngasemva enkosi kwii-indent enazo kwinxalenye ephezulu.
Kwiphepha, iikhamera zinenombolo "eyaneleyo" yokubonelela ngeziphumo ezilungileyo. Sinekhamera esemva ene-lens ezimbini ezinesisombululo se-16 Mpx kunye ne-5 Mpx. Ine-self-timer, ukubonwa kobuso, kunye nokudubula okuqhubekayo. Ujoliso olungagqibekanga luyazenzekela, nangona singalutshintsha ngokucinezela iscreen. Kwaye sinokukhetha ukwenza iifoto zethu, okanye sikwenze kwi-HDR okanye kwimowudi yepanoramic.
Kule foto ithathwe ngaphandle sifumene iingxaki. Mhlawumbi ukukhanya kwendalo kwakungeyona nto ibhetele kuba imini yayisibekele kakhulu. Indlela yamehlo ehamba ze ayibonakali imbi. Kodwa nje ukuba sandise ifoto sibona ukuba nakwizinto ezikufutshane nekhamera, ubukhali bubonakala ngokungabikho kwayo.
Isicelo sekhamera esipheleleyo
I-OUKITEL U18 inayo isicelo sekhamera esisebenza kakhulu. Zisuka nje, ngokwenza ukuba ikhamera isebenze iindlela ezahlukeneyo zokudubula. Ukusuka kwifoto eqhelekileyo okanye ukurekhodwa kwevidiyo, kwiindidi ezahlukeneyo ze "portrait" ngasemva okungacacanga. Umnyama nomhlophe okanye ifoto ebanzi.
Sinefayile ye- imowudi yefoto yobungcali. Ukuyisebenzisa sinakho ukwenza I-ISO, ibhalansi emhlophe okanye iisetingi zolawulo lwesango lokuvula. Amathuba amaninzi okufumana okuninzi kwikhamera. Ukongeza, sikwanethuba lokusebenzisa naziphi na izihluzo ngaxeshanye nokubanjwa. Into apho uninzi lweefemu zisebenzisa khona iikhamera zazo kwaye zinomtsalane kumsebenzisi.
Ukugxilwa kwekhamera ye-OUKITEL U18 kunokuba novakalelo kakhulu. Kwaye sifikelele kwesi sigqibo emva kokuthatha izinto ezahlukeneyo kwindawo enye kunye nokufumana iziphumo ezahluke kakhulu. Kwaye phakathi kwesihlanu okanye isithandathu ekucingelwa ukuba zezinye iifoto sifumene umahluko omkhulu ngokubhekisele kugxininiso nenkcazo.
Kule foto, nokuba usenza umfanekiso omncinci wedijithali, sinenkcazo elungileyo yemibala kunye neetoni. Kwaye inqanaba lokugxila libonakala lingcono kunelangaphambili.
Ngaba ibhetri ye-OUKITEL U18 yanele?
Kuphononongo lwamva nje olwenziwe kwii-smartphones zamva nje zokufika kwintengiso, sijonga utshintsho oluthile. Kuyinyani ukuba Iibhetri zikhula ngamandla. Kwaye kancinci kancinci injongo kukuba ukuzimela kufunyenwe. Inyani yile yokuba oku akusoloko kusenzeka kunye neebhetri ezinkulu.
Sibona njengotyekelo oluqhelekileyo lokuba ii-smartphones ezintsha zineescreen ezinkulu. Izikrini eziya ngokuya zinezisombululo eziphezulu kunye nokuqaqamba kokuqina. Kwaye ke, njengoko izikrini zikhula, inqanaba lokusetyenziswa kwebhetri lonyuka.
Ngesi sizathu, ebusweni bokusetyenziswa kwamandla aphezulu kubalulekile ukumilisela isixhobo ngeyona ntlawulo ibhetri iphezulu. Ke ngoko, kwizihlandlo ezimbalwa sibona ukuba ifowuni entsha iyakwazi ukuzimela. Kunzima kakhulu ukufumana i-Smartphone elawula ukudibanisa isikrini esikhulu kwaye kwangaxeshanye ibhetri yayo ihlala ixesha elide.
Ukulungiswa kakuhle kunye nolingano phakathi kwawo onke amacandelo efowuni kuya kubaluleka ngakumbi.. Ukusuka kwiprosesa ukuya kubukhulu bokukhanya kwescreen. I-OUKITEL U18 ine-4000 mAh ibhetri. Kwaye nangona ayisiyo ibhetri enkulu, enkosi "kulungiswa" kwezinto zayo, ingaphezulu ngokwaneleyo ukuba emva kosuku olude ikwazi ukufikelela esiphelweni
Umsebenzi olungileyo ovela e-OUKITEL, uphumelele kwisiphelo esinokuzimela okuhle. Ngokukodwa ngaphandle kokuba nzima kakhulu, ukuba siyithelekisa nee-smartphones ezinomthamo ofanayo. Kananjalo, ngaphandle kobukhulu besixhobo esikhula ngokungalawulekiyo njengoko sele sibonile okwenzekileyo nabanye.
Ukhuseleko luzuza ukuzithemba
I-OUKITEL U18 ixhotyiswe ngeendlela ezahlukeneyo zokhuselo. Ewe kunjalo, inesiseko ipatheni yokutshixa I-Android yeyakho. Kodwa ukhuseleko lwakho luyenziwa kunye umfundi weminwe emi ngasemva. Iphendula ngokukhawuleza ukuvula kwaye inokuqwalaselwa ngemisebenzi eyahlukeneyo.
Ukongeza kwezi nkqubo zikhankanyiweyo ngaphambili zokulawula ukhuseleko, i-OUKITEL iyaqhayisa ngokuba nayo kwi-U18 yayo Inkqubo yokufumanisa ubuso phambili. Kwaye inyani kukuba ukuzama ezinye ezishiye okuninzi kunganqweneleki. Singatsho ukuba "ubuso be-Id" ye-OUKITEL U18 iyasebenza. Singavula ngokwenene iselfowuni usebenzisa ubuso bethu, kwaye yeyethu kuphela.
Ukuqala, ukufumanisa ubuso kuthatha ixesha elifutshane kunokuthatha ifoto elula. Kwaye oko kuyabonisa kuloo nto Ukufundwa kobuso ekuvuleni kuchaneke ngakumbi. Emva kovavanyo oluninzi olwenziwe, yayinokwenzeka kuphela ukuba ivule ifowuni enobuso oburekhodiweyo bokwenza njalo. Ekugqibeleni sikwazile ukuvavanya isoftware enzulu yokufumanisa ubuso esebenza ngokwenene.
Inkqubo ephuculweyo yokwamkelwa kobuso
Ngobubi, kufuneka sitsho ukuba sinengxaki emva kokuvula Ukuvula ngokufumanisa ubuso. Ngokomgaqo, kubonakala ngathi yimpazamo ukuba ayinakudityaniswa nesifundi somnwe. Oko kukuthi, ukuba sikhetha ukuvula ngobuso, umfundi weminwe uya kuba engasebenzi. Into ebonakala ngokungathandekiyo. Singamdibanisa umfundi ofaka iminwe kunye nomzekelo wokuvula, kodwa hayi ngokufumanisa ubuso.
Kwakhona, xa umfundi okhupha iminwe ekhubazekile, iminwe ebesiyirekhodile iyasuswa. Kwaye ukuba sifuna ukuyisebenzisa kwakhona kuya kufuneka siyibhalise kwakhona. Kuyihlazo ukungakwazi ukuthetha kakuhle ngenkqubo esebenza ngokumangalisayo ngenxa yezizathu ezingaphandle kwayo. Kwaye emva kokuyizama kwaye sabona ukuba iyasebenza, sikhethe ukuba kufundwe ngomnwe, ngokukhawuleza kunye nendlela yokusebenzisa, kuba akufuneki sicofe iqhosha "lasekhaya" ukwenza ikhamera isebenze.
Ndiyathemba ukuba le ngxaki incinci yokungahambelani iya kusonjululwa kungekudala ngohlaziyo lwenkqubo. Kuba inqaku lokuma kwi-Smartphone ngokwaso sigqibe kakhulu. Iba ngumqobo ongathandekiyo.
Ndivalelise okokugqibela kwi-3.5 mm jack?
Njengoko besiphawulile ekuqaleni, i-OUKITEL U18, ayinayo imveliso yeklasikhi encinci kaJack. Kwaye siya kufuna iadaptha eza nebhokisi ukuze sikwazi ukudibanisa ii-headphone zethu. Kwakhona kuya kufuneka sithathe esinye isixhobo esincinci. Okanye utyale iseti yentloko yeBluetooth, ebonakala ngathi kulapho bafuna ukusisa khona phantse sinyanzelwe.
Siyayazi loo nto kwintengiso kukho izinto ezingenazingcingo ukumamela umculo ngamaxabiso amahle kakhulu. Kodwa kukho abo bangafuni kubiza ibhetri isuka kwenye "igajethi encinci". Sisaxhathisa ukuyeka isinxibelelanisi sejack 3.5mm. Kodwa kubonakala ngathi kulapho abavelisi basikhokelela khona.
Ngokubhekisele kwisithethi sangaphandle, kuba inye kuphela, kufuneka sitsho ukuba ayiveli ngamandla ayo. Inesandi esichanekileyo, sinenkcazo elungileyo kwaye ngaphandle kokugqwetha. Nangona inqanaba eliphezulu liwela kancinci.
Sibonile ukuba ezinye ze "top" ezintsha zomphezulu ophezulu zigqibe kwelokuba zibheje ekuxhobiseni izixhobo zazo ngezithethi ezinamandla ze stereo. Ke sihlala sinethemba lokuba le nto iya kwamkelwa ngabo bathi babalulekile.
Eyona ilungileyo kunye neyona ilungileyo ye-OUKITEL U18
Ngokuqinisekileyo kufuneka siqale ngokuthetha Uyilo lwale Smartphone. Ngaphandle kokufana okucacileyo enako kwi-iPhone X. Umsebenzi ukwenziwe ngasemva, nakwizakhelo zayo. Ukongeza kwiziphelo ezigoso kwiscreen nakwikhava yangasemva. Zenza ukuba sijongane Isiphelo sendlela esingena ngokubona kwaye sigqibe kakuhle.
La ubomi bebhetriUkuthabathela ingqalelo ukusetyenziswa okongezelelekileyo okuveliswe siscreen sobuntu obunjalo, kulungile. Ngaphandle kokuba ibhetri esingayithathi njengeyona inkulu kakhulu, ukusebenza kwayo kulungile. Kwaye ukungabukeli itshaja usuku olunesiqingatha kulungile.
Nangona ayingomahluko mkhulu kakhulu, ubukhulu ye-OUKITEL U18 yile ngaphantsi kakhulu kunezinye izixhobo ezineescreen nee-intshi ezincinci. Xa kuthelekiswa nabanye, kuncinci kwaye kuncinci. Kwaye Nokuba ucinga ukuba isikrini sayo zii-intshi ezingama-5,85.
El Ukugxilwa kwekhamera kunokuphuculwa. Ayibonakali izinzile okanye ihlala isebenza ngendlela efanayo. Mhlawumbi inokusonjululwa ngohlaziyo lwesoftware yakho. Sele sivavanye ikhamera enye kunye nesenzi esifanayo kwenye itheminali kwaye iziphumo bezingcono kakhulu.
ukuba sebenzisa ibha yesaziso okanye uhlengahlengiso kufikelelo ngqo kuya kufuneka sitsale umnwe ukusuka phezulu kuye ezantsi ngenye yeekona zayo. Embindini, ngenxa yenotshi, ayisiqondi isenzo ngokuslayida umnwe wakho phezulu nasezantsi embindini wesixhobo. Into esiyiqhelileyo. Iya kuba ngumcimbi wokuziqhelanisa nayo.
Sikwazile ukuqaphela, emva kwexesha elide lokudlala kwakhona kwevidiyo, oko ifowuni ishushu kancinci. Akukho nto yothusayo, kodwa sikwazile ukuqaphela ukunyuka okuncinci kweqondo lobushushu.
Nangona ayisiyonto yokuqaqambisa, i-OUKITEL U18 iyabonisa inobunzima kunezinye izixhobo. Njengoko sele sichazile, ubukhulu becala ngenxa yobomi bebhetri obunesisa.
kugxilwe kwikhamera yezithombe
ukufudumeza kancinci ngamaxesha okusetyenziswa rhoqo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uphengululo lweOUKITEL U18
UKUHLAZIYWA KAKHULU KOMHLOBO, KUNYE OKUQHELEKILEYO KONKE UKUBA BAYAKUMAMELA KWEZI NKCUKACHA BAKHUPHELE ISIQINISEKISO ESIBALULEKILEYO NGAPHANDLE KOKUTHANDAZA, ​​UYAZI? NDIZA KULINDA UKWAZI UKUBA BABE PHUMELELA UKUZE BAKWAZI UKUFUMANA I-LIKE LOKHO UBHALA UKUZE ULINDE, NDIBULISA KWIPHONDO LASETAZUNCHALE, SLP MEXICO
Enkosi kakhulu ngokusifunda, nangengxelo yakho. Inyani yile yokuba sisiphelo esithanda kakhulu kwizinto ezininzi, nangona sinokuphuculwa kwabanye. Kodwa kuyinyani ukuba kuya kusiba nzima ukufumana i-terminal efanelekileyo yomsebenzisi ngamnye. Umbuliso omkhulu eMexico !!
Isamsung isebenza kwi-smartwatch nge-Wear OS